Somaliya: Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sida Oo Xukuno Kala Duwan Maanta Ku Riday Eedaysanayaan Lala Xidhiidhayay Al-shabaab | Duul News International
Somaliya: Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sida Oo Xukuno Kala Duwan Maanta Ku Riday Eedaysanayaan Lala Xidhiidhayay Al-shabaab	(Duulnews)-Maxakamadda Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukuno ka la duwan ku riday 7 xubnood oo lagu eedeeyey in ay ka tirsanyihiin kooxda Al-shabaab.
kuwaas oo maxakamaddu sheegtay in ay qirteen Dambiyada Xeer ilaalintu ku soo oogtay.
Gaashaanle dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadam ayaa warbaahinta u sheegay in ragan lagu xukumay xabsi u dhexeeya 10 ilaa 5 sanno.
dadka maanta ay maxakamaddu xukuntay ayaa magacyadoodu yihiin Cabdi raxmaan Axmed Afrax,Cabdi raxmaan Muqtaar Caamir oo lagu xukumay 10 sanno oo xadhig ah Cabdi naasir Aadan Caynte, Cabdulaahi Xersi Maxamed, Maxamed Xasan Cali, Maxamed Cabdi Yuusuf oo lagu xukumay 5 sanno oo xabsiya iyo weliba Maxamed Deeq Cabdul qaadir Fiidow oo lagu xukumay 6 sanno.
Xukunada kala duwan ee ay Maanta Maxkamada Ciidamadu ku dhawaaqday ayaa kusoo beegmaya maalin uu ka dib markii Xoogaga Al-shabaab ay Weerar lagu hoobtay ku qaadeen Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Somaliya,kaas oo sababay dhimashada dad kor u dhaafaya 10 qof iyo dhawaaca tiro intaas ka badan.